Umatshini wokugcwalisa umatshini waseChina kunye noMthengisi | I-OBer
Imitshini yokugcwalisa ibhiya
Iinkqubo zokugcwalisa zibonelela ngeendlela ezininzi ezizenzekelayo kunye nesabobicic (yokunyanzela uxinzelelo) yokubhotela ibhiya kunye noomatshini bokunkonkxa kubandakanya i-rinser ye-semi-othomathikhi, i-filler kunye ne-capper / i-monoblocks.
Umgca wokuzaliswa kwebhotile yeebhiya
Le migca yokugcwalisa ibhiya inokusetyenziselwa ukufaka iibhotile kuluhlu olwahlukileyo lweziphuzo kunye nokusela njengamanzi, iwayini, i-cider, i-kombucha, iziselo ezihlwahlwazayo kunye neziselo ezihlwahlwazayo.
Umgca wokugcwalisa sinokubonelela nge-1000BPH Line, 2000BPH Line, 3000BPH Line, 5000BPH Line, 6000BPH Line, 8000BPH Line ngokuhambelana nomthamo wakho wotywala.
1. Usebenzisa ukuhambisa kuthumele ukufikelela kunye nokuhambisa ivili kwibhotile itekhnoloji eqhagamshelwe ngokuthe ngqo; Iscrew esirhoxisiweyo kunye nemixokelelwane yokuhambisa, oku kwenza ukuba utshintsho olwenziwe ngebhotile lube lula.
2. Ukudluliselwa kweebhotile kwamkela itekhnoloji ye-bhotile yentamo yebhotile, uguquko olwenziwe ngebhotile akufuneki luhlengahlengise inqanaba lezixhobo, utshintsho kuphela olunxulumene nembasa egobile, ivili kunye nenayiloni zanele.
3.Ikliphu yomatshini wokuhlamba ibhotile yentsimbi eyomeleleyo kwaye yomelele, akukho ndawo ichukumisayo yomlomo webhotile ukunqanda ungcoliseko lwesibini.
4. Isantya esiphezulu sokulinganisa uxinzelelo lokuhamba kwevalvethi yokugcwalisa, ukuzalisa ngokukhawuleza, ukugcwalisa ngokuchanekileyo kwaye akukho manzi aphumayo.
5. Ukwehla okujikelezayo xa ibhotile yemveliso, ukuguqula imilo yebhotile kungekho mfuneko yokulungisa ubude beetyathanga zokuhambisa.
Umthamo（B / H.） (330ml, 500ml, 720ml), 1000-8000Iibhotile
Ubungakanani bebhotile Intamo: -20-50mm；Ukuphakama:Ubukhulu: 150-320mm
Ukuzalisa ukuchaneka ＜+ 1MM
Uxinzelelo lomoya 0.4Mpa
Ukusetyenziswa komoya (m⊃3; / min) 0.3
Ubunzima（ikg） Ngokomatshini wokugcwalisa
Ubukhulu（I-L * W * H)（mm） Ngokomatshini wokugcwalisa
Egqithileyo Inkqubo yoNyango lwaManzi yokuThengisa
Okulandelayo: Inkqubo yeBhiya eKhanyayo
Umatshini wokugcwalisa utywala
Umatshini wokugcwalisa utywala encinci
Umatshini wokugcwalisa iibhotile zebhiya
Umatshini wokugcwalisa utywala omncinci
Umatshini wokuzalisa iibhotile